Dhibaatada haysata qowmiyada Rohingya - BBC Somali
Dhibaatada haysata qowmiyada Rohingya
15 Maajo 2015
Image caption Tahriibayaal
In kabadan lix boqol oo tahriibayaal ah ayaa waxa ay gaareen gobalka Aceh, ee dalka Indonesia.
Waloow doon kale, ay ciidamdda badda ay ka celiyeen biyaha Indonesia, iyo mid kale oo ay celiyeen maamulka Thailand.
Waxaana saarnaa kumannaan ah qowmiyada Rohingya, iyo tahriibayaal u dhashay Bangadhesh, kuwaas oo toddobaadyo ku jiray badda, kaddib markii ay heli waayeen ogalaansho ay ku galaan dalalka Indonesia iyo Malaysia.
Dadkan oo ka badan 750 qof, oo ah Rohingya iyo Bangaladhesh ayaa lagu badbaadiyey maanta meel dibadda ka ah xeebta Indonesia.
Doon kale ayaa ciidanka badda, waxa ay dib uga celiyeen biyaha Indonesia.
Image caption Dad u dhashay qowmiyada Rohingya iyo Bangaladhesh
Dadkani waxay ka mid yihiin dhowr kun qof oo todobaadyo badda saarnaa, oo loo diiday in ay ku degaan Malaysia iyo Indonesia.
Doon soo gashay biyaha Indonesia, ayaa rakaabkii saarnaa waxaa ku jiray 61 caruur ah, waa ayna degi lahayd haddii aanay kalluumeysata Indonesiyan ah soo daadgureyn.
Maanta oo jimca ah ilaa 300- oo qof oo ah Musliminta Rohingya ah, oo lagu ciqaabo dalkooda Burma, ayaa doontii ay saarnaayeen markii loo dayactiray oo biyo iyo raashin loo saaray ay safar kale oo aan jihadiisa sugneyn ay gashay, waayo Thailand waa ay u diiday biyaheeda.
Xog-hayaha guud ee QM, ayaa ugu baaqay dalalka Koonfur Bari Asia, in ay xuduudooda iyo dekadahooda u furaan dadka nugul, Maraykankana waxa uu sheegay in dalalkaas ay badbaadiyaan nafta dadkaasi.
Ku xigeenka Ra’iisul wasaaraha Malaysia, wuxuu eeda saaray dawladdaha Burma iyo Bangladesh, isagoo waliba farta ku fiiqay dalka Burma, oo uu ku canaantay sida ay ula dhaqmaan qowmiyada Rohingya.
Qowmiyadan Rohingya, ayaa ah muslimiin dalkaasi Burma ku nool, oo looga badan yahay.
Sanad walba waxaa qaxa kumannaan ka cararaya cunsiryadd, loo aanaynayo in ay soo abaabusho dowladda dalkaasi.
Gobolka Rakhine ee Burma, waxaa ku nool hal Million oo ah qowmiyada Rohingya, oo qarniyo deganaa halkaasi, laakiin dowladda Burma, waxay leedahay waa dad sharci daro dalka ku soo degay oo markii horeba ka yimi Bangaldesh.